အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နှုတ်က္ခပါဌ်တော် | Ko Rohingya
အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နှုတ်က္ခပါဌ်တော်
Ko Khin Mg Ye Sein wrote: Qur’an 9:5 “When the sacred forbidden months for fighting are past, fight and kill disbelievers wherever you find them, take them captive, beleaguer them, and lie in wait and ambush them using every stratagem of war. ကုရ်အာန် ၉း ၅ ။>>
သို့ ဖြစ်ပေရာ ထူးမြတ်သောလများ ကုန်လွန်သွားသောအခါ အသင်တို့သည်..မွရ်ရစ်က်..တို့ အား အသင်တို့ တွေ့ လေရာနေရာများ၌ သတ်ဖြတ်ကြလေကုန် ၊ ထို့ ပြင် အသင်တို့ သည် ၎င်းတို့ အား ဖဖ်းဆီးကြလေကုန်၊ ထိုမှတပါး အသင်တို့ သည် ၎င်းတို့ အား ချုပ်နှောင်အကျဉ်းချထားကြလေကုန်၊ ၎င်းပြင် အသင်တို့ သည် ထိုသူတို့ အား ဖဖ်းဆီးရန် ပုန်းအောင်းရာနေရာတိုင်းတွင် ပုန်းအောင်း၍ ချောင်းမြောင်းကြလေကုန် ။
မှတ်ချက် ။ မွရ်ရစ်က် ဆိုသည်မှာ ရုပ်ထု ကိုးကွယ်သူများကို ဆိုလိုပါသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရုပ်ပွားတော်များကို မွတ်စလင်များ အငြိုးတကြီး ဖျက်ဆီးကြရသည့် အကြောင်းရင်းခံ ကုရ်အာန်ကျမ်း ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းသော ဘာသာတရား၏ မငြိမ်းချမ်းသော ညွှန်ကြားချက်များကို ကိုးကား ဆွေးနွေးကြစေလိုပါသည်။>>
Ko Rohingya: ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ နှုတ်က္ခပါဌ်တော်ကို လေ့လာတဲ့အခါ မိမိလိုရာဆွဲ ဖော်ပြချင်တဲ့ အပိုဒ်ကိုပဲ ထုတ်နုတ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆိုလိုချက် အနှစ်သာရ တိမ်းပါးသွားပြီး၊ နားလည်မှုတွေ လွဲမှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကျမ်းပိုဒ် သူ့အရှေ့က ကျမ်းပိုဒ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ အဲဒီလို ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ခွဲထုတ်ပြီး တင်ပြလိုက်တော့ မသိတဲ့သူဆိုရင် မုရ်ှရီးက်တွေကိုပဲ အကြောင်းမဲ့ တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းပဲ လိုက်သတ်နေခိုင်းတဲ့ အမြင်မျိုးရသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပေးမယ်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၊ ကဏ္ဍ (၁၀၇)၊ ကျမ်းပိုဒ် (၄) မှာ “သို့ဖြစ်ပေရာ (အကြင်သို့သော) ဆွလာတ်ဝတ်ပြုသူတို့၌ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခြင်းသည်ရှိ၏။”ဆိုပြီး မိန့်ရှိထားတယ်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးဟာ ဒီကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ လိုရာဆွဲ တင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆွလာတ်ဝတ်ပြုသူတို့၌ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခြင်းသည်ရှိ၏ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ဟာ အခြား ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေနဲ့ သွားပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြား ဆွလာတ်ဝတ်ပြုခြင်းဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့ မိန့်ရှိထားလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယင်းကျမ်းပိုဒ်နောက်ပါရှိတဲ့ ကျမ်းပိုဒ် (၅) နဲ့ (၆) မှာ မည်သို့သော ဆွလာတ်ဝတ်ပြုတွေဟာ ပျက်စီးကြရမှာလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆက်လက်တင်ပြထားတယ်။ “ထိုသို့သောသူတို့သည် မိမိတို့၏ ဆွလာတ် ၀တ်ပြုမှု(တာဝန်)ကိုပင် မေ့လျော့ထားကြကုန်၏။ အကြင် (ဆွလာတ်ဝတ်ပြု)သူတို့သည် (မိမိ တို့၏ဆွလာတ်ဝတ်ပြုမှုစသော ကောင်းမှုများကို) ပြစားကြကုန်၏။”>>
ဒီတော့ ယင်းကျမ်းပိုဒ်သုံးပိုဒ်ကို တွဲပြီး ဖော်ပြလိုက်ရင်တော့ ဆွလာတ်ကို ပေါ့တီးပေါ့ဆ လျစ်လျူရှု မေ့လျော့ထားကြတဲ့သူတွေ၊ နောက်ပြီး သူတစ်ပါးကို ပြစားဖို့အတွက် ၀တ်ပြုပြတဲ့သူတွေဟာ ပျက်စီးကြရမယ်လို့ မိန့်တော်မူထားခြင်း ဖြစ်ပေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ မိမိ လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းလေးကိုပဲ ကွက်ပြီး၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင် မရိုးသားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖော်ပြလို့မရပါ။
Then when the Sacred Months (the Ist, 7th, 11th, and 12th months of the Islâmic calendar) have passed, then kill the Mushrikûn (see V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, then leave their way free. Verily, Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful.
ဒါကြောင့် Ko Khin Mg Ye Sein ကိုးကားခဲ့တဲ့ ကဏ္ဍ (၉)၊ ကျမ်းပိုဒ် (၅) တစ်ခုတည်းကိုပဲ မရိုးသားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ပြမယ်ဆိုရင် နားလည်မှုတွေ လွဲမှားကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူ အရှေ့က ကျမ်းပိုဒ်များ (၁-၄ အထိ)နဲ့ အနောက်က ကျမ်းပိုဒ်များ (၆-၁၆ အထိ)ကို တင်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကြောင်းအရာက ဆက်စပ်နေလို့ပါ။ ကောင်းပြီ။ ဒီလို တင်ပြယုံနဲ့လည်း မပြည့်စုံသောပါ။ ဒီကျမ်းပိုဒ်များ ကျရောက်ရလာခြင်းရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကို သိရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကျရောက်ခဲ့တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ကျရောက်ခဲ့တာလဲ။ အသေးစိတ် ရေးရမယ်ဆိုရင် ကျမ်းငယ်တစ်စောင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် အသေးစိတ် မရှင်းတော့ပါ။ အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကျမ်းပိုဒ်တွေဟာ National Security and Defense (အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး)ဆိုင်ရာ အမှုကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျမ်းပိုဒ်များ ဖြစ်တယ်။ ပဋိညာဉ်ကို ကတိမတည် ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ သစ္စာဖောက်များ၊ အပြစ်မဲ့လူသားတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို စစ်ထိုးဖို့ အမိန့်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ သစ္စာရှိတဲ့သူတွေကို စစ်ထိုးခိုင်းတာ မဟုတ်။ အပြစ်မဲ့ လူသားတွေကို မသတ်ဖြတ်တဲ့ လူကောင်းသူကောင်း မုရ်ှရီးက်တွေကို စစ်ထိုးခိုင်းတာ မဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီး ဒီအာယတ်တော်မှာ သုံးထားတဲ့ ‘ကသ်လ်’ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဒီနေရာမှာ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ စစ်ထိုးခြင်းလို့ အနက်ဖွင့်တာက ပိုပြီး သင့်လျှော်ပါတယ်။ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ စစ်ထိုးခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင် မည်သည့် ၀ိရောဓိမှ ပေါ်ပေါက်စရာ မရှိတော့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကျမ်းပိုဒ်ထဲမှာပဲ ဖမ်းဆီးဖို့လည်း အမိန့်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လိုရင်းကတော့ အသင်တို့တွေဟာ (ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်၊ ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ သစ္စာဖောက်) မုရ်ှရီးက်များကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ စစ်ထိုးကြ။ စစ်တိုက်ကြလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Ko Khin Mg Ye Sein wrote: မှတ်ချက် ။ မွရ်ရစ်က် ဆိုသည်မှာ ရုပ်ထု ကိုးကွယ်သူများကို ဆိုလိုပါသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရုပ်ပွားတော်များကို မွတ်စလင်များ အငြိုးတကြီး ဖျက်ဆီးကြရသည့် အကြောင်းရင်းခံ ကုရ်အာန်ကျမ်း ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Ko Rohingya: အနေနဲ့ အထက်မှာ တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီကျမ်းပိုဒ်က ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်၊ ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ သစ္စာဖောက် မုရ်ှရီးက်များနဲ့ပဲ ပတ်သက်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လေးစားတဲ့၊ တန်ဖိုးထားတဲ့၊ ကတိ သစ္စာတည်ကြည်တဲ့၊ အလိမ်အညာ မုသားဝါဒ ကင်းစင်တဲ့ မုရ်ှရီးက်များ အကျုံးမ၀င်ပါ။ သူတို့ကို စစ်ထိုးဖို့ ဒီကျမ်းပိုဒ်မှာလည်း မိန့်တော်မမူထားသလို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် စ-လယ်-ဆုံး မည်သည့်နေရာမှာမှလည်း စစ်ထိုးဖို့၊ တိုက်ခိုက်ဖို့ သွန်သင်မိန့်ကြားထားခြင်း မရှိပါ။ အာဖဂန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ဖြိုခွင်းဖို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူအချို့ကို ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ့်ပညာရှင်ကြီး များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာ Khin Mg Ye Sein မသိခဲ့တာလား။ ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ အစ္စလာမ်မှာ သူတစ်ပါးရဲ့ ကိုးကွယ်ရာကို ယင်းသို့ ဖျက်စီးခြင်းကို လုံးဝ တားမြစ်ထားပါတယ်။>>
Ko Khin Mg Ye Sein wrote: ငြိမ်းချမ်းသော ဘာသာတရား၏ မငြိမ်းချမ်းသော ညွှန်ကြားချက်များကို ကိုးကား ဆွေးနွေးကြစေလိုပါသည်။
Ko Rohingya: Khin Mg Ye Sein @ ထပ်ပြီး လွဲပြန်ပြီ။ အစ္စလာမ်ဟာ ဘ၀တည်ဆောက်မှု လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေး သီးသန့် မဟုတ်ပါ။ ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာ အစ္စလာမ့်ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးရဲ့ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးကဏ္ဍ မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်ချုပ်ထားပြီး၊ ကတိမတည် သစ္စာဖောက်ဖျက်ပြီး၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ထိုသစ္စာဖောက်တွေက စတင် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်လာတဲ့အတွက် သစ္စာဖောက်တွေကို ပြန်လည် ခုခံ၍ စစ်ထိုးခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ အသိဉာဏ်နဲ့ အလွန် လျှော်ညီတယ်ဆိုတာ အသိဉာဏ်မှန်သူတိုင်း သိရှိကြပါတယ်။ သစ္စာမရှိတဲ့ လူဆိုးလူမိုက်တွေ၊ သူတစ်ပါးအသက်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ သူတွေကို ဥပဒေအရ ပြန်လည်ပြီး တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ အမိန့်ပေးထားခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံနဲ့ မိမိ အမျိုးသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ဘ၀များကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘ၀များဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မရှင်းတဲ့အချက်အလက်တွေရှိရင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ အခုလို ရှင်းပြပေမဲ့လည်း ဒီရှင်းပြချက်တွေဟာ အလင်းမရတဲ့ နှလုံးသားတွေ၊ ကန်းနေတဲ့ အသိဉာဏ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေအဖို့တော့ အကြောင်းထူးလာဖို့ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ မွတ်စလင်မ်များရဲ့ ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ရာအရှင်၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း ကင်းတော်မူသော၊ တစ်ဆူတည်း၊ တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၊ ကဏ္ဍ (၆)၊ ကျမ်းပိုဒ် (၁၀၄)မှာ အမှန်သစ္စာတရားကို မမြင်နိုင်ကြတဲ့ လူသားများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော်မူထားတာက “မည်သူမဆို မျက်စိကန်းလျက်နေပါလျှင် ထိုသူ၏အပေါ်၌သာ နစ်နာမှုရှိအံ့။ အမှန်သော်ကား ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အပေါ်၌ ကြီးကြပ်အုပ်ထိန်းသူ မဟုတ်ပေ”လို့ မိန်ကြားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်အနေနဲ့ အမှန်သစ္စာတရားကို Khin Mg Ye Sein ကဲ့သို့ မမြင်နိုင်ကြသေးသောသူများကို အလင်းရရန် ကြိုးပမ်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၊အမှန်တရားကို အမှန်အတိုင်း မမြင်နိုင်တဲ့ လူသားများအား မြင်နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါ။ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်နေသော အဖြစ်ဆိုးမှ ထိုသူများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ ထိုလူများအား မှန်ကန်တည်ကြည်သော စကားကိုသာ ပြောဆိုရေးသားနိုင်တဲ့ သောင်ဖီးက်စွမ်းအား ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ အာမီးန်။
This entry was posted on February 6, 2013, in ဘာသာရေး, အစ္စလာမ် and tagged ချမ်းမြေ့, ဘာသာရေး, အစ္စလာမ်, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကိုနေမျိုးဝေ၏ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သော ဖဘမှတ်ချက်များ ရေးသားခဲ့ခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း ကြေညာချက်	အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၁) →